आजको राशिफल फागुन २७ गते बिहीबार - Baikalpikkhabar
आजको राशिफल फागुन २७ गते बिहीबार
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२ ने. सं. १८४१ वि.सं. २०७७ साल फागुन २७ गते बिहीबार, ११ मार्च २०२१ । प्रमादि संवत्सर फाल्गुन कृष्णपक्षको त्रयोदशी तिथि
अवसर र व्यवधानका बीच पनि प्रतिफल हातपार्न सफल भइनेछ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लाग्नेछ ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । साथ दिनेहरू बढ्नेछन् । रचनात्मक काम बन्नुका साथै मनग्य धन आर्जन हुनेछ ।
अध्ययनमा विशेष प्रगति हुनेछ । ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । समय राम्रो छ ।
पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
मिहिनेतले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नेछन् । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ ।
कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी व्यापारबाट प्रशस्त फाइदा हुने समय छ । दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त होला ।
आँटेको काम स्थगित हुनाले मन खिन्न हुनेछ । तापनि जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सयहोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
खर्च लागे पनि काम बन्नेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ला । प्रयत्न गरेमा अवरोध हट्नेछ ।
आवश्यकता अनसारको धन जुटाउन सकिनेछ । केही खर्च बढ्नेछ । दिन सामान्य छ ।
रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुनेछ । पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ ।
बिहिबार, २७ फागुन, २०७७, बिहानको ०९:३७ बजे